Madaxweyne Siilaanyo Oo Ka Qayb Galay Marxuum C/raxmaan Talyanle Oo Galabta Lagu Aasay Hargaysa | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Hargaysa (SDWO): Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Axmed Maxmaed Silaanyo oo ka qaybgalay aas qaran oo loo sameeyey Marxuum Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Taltaanle, oo galabta si heer qaran ah loogu aasay qubuuraha Naaso-hablood ee bariga magaaladda Hargeysa.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Axmed Maxamed Silaanyo oo ay wehelinayaan xubno ka mida golaha wasiirrada, madaxda axsaabta qaranka, madaxda hay’adaha madaxa banaan, madax-dhaqameedyo.
Culimaw-diin iyo dadwayne tiro badan ayaa ka qayb galay aas qaran oo maanta xabaalaha naasa-hablood ee magaalada Hargayasa loogu sameeyay marxuun xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle oo doraad ku geeriyooday dalka Hindiya.
Madaxweynaha ayaa tacsi tiraanyo leh u diray dhamaan shacabka reer Somaliland gaar ahaana qoyskii iyo qaraabadii xildhibaanka isagoo Madaxweynuhu ku sifeeyay marxuumka inuu ahaa shakhsi wanaagsan oo dalkan Jamhuuriyadda Somaliland wax weyn taray.
Madaxweynaha oo ka hadlayay shakhsiyadda marxuum Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle ayaa yidhi “ILLAAHAY naxariistii janno ha ka waraabiyo marxuumka, shakhsi wanaagsan ayuu ahaa innagana ha inooga daba naxariisto” ayuu yidhi Madaxweynuhu.
INAA LI-LAAHI W INNAA ILLAYHI RAAJICUUN.